Rivaldo oo si toos ah u magacaabay badelka saxda ah Luis Suarez ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 24 Jan 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa ka hadlay xilli ciyaareedka Blaugrana, kaddib markii shaqada laga ceyriyay Ernesto Valverde isla markaana macalinka cusub ee kooxda loo magacaabay Quique Setién.
Dhinaca kale Rivaldo ayaa wuxuu ka hadlay maqaamka iyo waxqabadka ciyaartoyda Barcelona iyo waxa ay kooxda Barca u baahan tahay si loo horumariyo isla markaana ay ugu guuleysato koobab xilli ciyaareedkan.
Sidoo kale halyeeyga reer Brazil ayaa wuxuu ka hadlay dhaawaca weeraryahanka reer Uruguay Luis Suarez, kaasoo kooxda Barcelona ka maqnaan doono mudo 4 bilood ah, sababa la xiriira dhaawaca halista ah ee ka soo gaaray dhanka Jilibka.
Rivaldo ayaa wuxuu si toos ah u magacaabay badelka saxda Luis Suarez ee kooxda Barcelona, xilli laga war qabo in saraakiisha Barca ay suuqa ugu jiraan sida ay ku heli lahaayeen badelka Suarez.
Haddaba Rivaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku magacaabay badelka saxda Luis Suarez:
“Edinson Cavani wuxuu doonayaa inuu ka tago Paris Saint-Germain suuqan kala iibsiga, waxaana u maleynayaa inuu wax weyn ku soo kordhin doono Barcelona”.
Edinson Cavani ayaa wuxuu dhibaato kalakulmay kooxdiisa Paris Saint-Germain sababa la xiriira inuusan tababare Thomas Tuchel si weyn ugu tiirsanaanin adeegiisa xilli ciyaareedkan, gaar ahaan tan iyo markii uu kooxda yimid weeraryahanka reer Argentina ee Mauro Icardi.